Tag: Real | Sagal Radio Services
Real Madrid iyo Atletico Madrid oo u soo baxay Sema Finalka Champions League
Sagal Radio Services • News Report • April 19, 2017
Kooxaha isku magaalada ah ee ka dhisan magaalada Madrid ayaa xalay xaqiijiyay u soo bixitaanka wareega afar dhamaadka ama Sema Finalka Koobka Horyaalada Qaarada Yurub ee Uefa Champions League.
Real Madrid oo si cajiib leh ugu soo baxday Sema Finalka Champions League, Ronaldo oo 3-gool dhaliyay
Sagal Radio Services • News Report • April 13, 2016
Kooxda Real Madrid ayaa xalay si cajiib leh ugu soo baxday Sema Finalka Koobka Horyaalada qaarada Yurub ee Champions League, kadib markii garoonkeeda Santiago Bernabua ay 3-0 uga badisay kooxda Wolfsburg ee dalka Jarmalka.
Barcelona oo Camp Nou ku garaacday Real Madrid, afar dhibcoodna ku qabatay hogaanka (Sawirro)
Sagal Radio Services • News Report • March 23, 2015
Barcelona ayaa afar dhibcood oo nadiif ah ku qabatay hogaanka horyaalka Spain, kadib markii ciyaartii sida weyn loo sugayo ee El Clasico ay guul kaga gaartay garoonkeeda Kooxda ay xafiiltamaan ee Real Madrid.
El Clasico: Maxaa kala heysta caawa Kooxaha Barcelona iyo Real Madrid
Sagal Radio Services • News Report • March 22, 2015
Kulanka sida weyn caalamka looga sugayo ee loogu magac daray El Clasico ayaa waxaa caawa isaga hor imaan doona Kooxaha Barcelona iyo Real Madrid, iyadoo kulankan uu yahay mid si aad ah isha loogu haayo, Adduunka oo dhana laga xiiseynayo.
Valencia oo soo gaba gabeysay guulihii is daba jooga ahaa ee Real Madrid, markii ay 2-1 uga badisay (Sawirro)
Kooxda Real Madrid ee heysa hogaanka Horyaalka Spain ee La Liga ayaa guuldaro ku bilaabatay sanadkan cusub ee 2015, markii kooxda Valencia 2-1 ku garaacday.
Falanqeynta Kulanka Xiisaha iyo Xamaasada Badan ee Caawa Dhax maraya Kooxaha Real Madrid iyo Barcelona
Real Madrid oo ka horimaaneysa Barcelona marnaba ma ahan kulan caadi ah, waxyaabaha hareer socda iyo tayada labada kooxood ayaana ka dhigaya kulanka Bernabeu ee maanta mid ka mid ah kulamada ugu waa weyn caalamka, hadiiba uusan aheyn kulanka ugu weyn.